South Africa ine Gurukota idzva rezveKushanya: Lindiwe Sisulu ndiani?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » South Africa ine Gurukota idzva rezveKushanya: Lindiwe Sisulu ndiani?
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Zimbabwe Breaking News • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Hon. Liniwe Nonceba, Gurukota rezveKushanya muSouth Africa
NeChitatu, Nyamavhuvhu 4 Hon. Lindiwe Nonceba Sisulu aive Gurukota rezvekugara kwevanhu, mvura, uye hutsanana kuSouth Africa. Pazuva iro akagamuchira kuferefetwa kweSIU muDhipatimendi rake kubvisa hutsotsi nehuori. Zuva rakatevera neChina, Nyamavhuvhu 5 gurukota iri rakagadzwa segurukota rezvekushanya muSouth Africa.
Maitiro ehuwori pamadhipatimendi ese ehurumende nemabhizinesi ehurumende haana kusarudzika kana kusarudzika kuMvura neHutsanana.
African Tourism Board yakagadzirira kurwa pamwe chete nechikwata chevakundi kuvaka zvakare kushanya muAfrica
Lindiwe Nonceba Sisulu akazvarwa muna Chivabvu 10, 1954 uye ari nhengo yezvematongerwo enyika yekuSouth Africa, nhengo yeparamende kubvira 1994.
Iye Hon. Lindiwe Nonceba Sisulu akagadzwa seGurukota rezveKushanya neMutungamiriri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, mukati medambudziko reCOVID-19.
Cuthbert Ncube, Sachigaro we African Tourism Bhodhi inokorokotedza Sisulu uye akapa rutsigiro rwake kubatsira gurukota idzva kugadzirisa zvakare nhoroondo dze Africa kuburikidza nekushanya.
Vashanyi vanosvika kuSouth Africa vakasvika pachinyorwa munaNdira 2018 vane 1,598,893 munaNdira uye rekodhi yakaderera 29,341 muna Kubvumbi wa2020 nekuda kwechirwere che COVID-19.
South Africa inzvimbo yekushanya uye indasitiri inoverengera huwandu hwakawanda hwemari yenyika.
South Africa inopa vese vashanyi vekumba nevekunze sarudzo dzakasiyana siyana, pakati pevamwe nzvimbo dzinoyevedza nharaunda nenzvimbo dzinochengetwa mitambo, dzakasiyana tsika tsika, uye waini inoremekedzwa. Dzimwe dzenzvimbo dzinozivikanwa zvikuru dzinosanganisira mapaki emunyika akati wandei, akadai seakakura Kruger National Park kuchamhembe kwenyika, mahombekombe nemahombekombe ematunhu eKwaZulu-Natal neWestern Cape, nemaguta makuru senge Cape Town, Johannesburg, uye Durban.
Gurukota idzva rinounza makumi emakore ezviitiko asi richange riine maoko akazara mukuvakazve nyika dzaro indasitiri yekushanya neyekushanya. Parizvino, COVID-19 iri pane imwe yepamusoro uye majekiseni ekudzivirira ari pasi, zvichiita kuti kushanya kwenyika dzese munyika ino kuve padhuze kusakwanisika.
Cuthbert Ncube, anomiririra African Tourism Industry saSachigaro weEswatini based African Tourism Bhodhi rakapa chirevo.
Cuthbert Ncube, Sachigaro weAfrican Tourism Board
Chikwata chedu iboka rako! Uyu ndiwo meseji yetariro nerutsigiro nevakuru veAfrican Tourism Board.
Tiri eady kutsigira gurukota idzva reSouth Africa. Izvi zvinobatsira kwete chete South Africa, asi matunhu ese eAfrica uye nyika uko indasitiri yekushanya inopa zvakanyanya kuGDP.
Cuthbert akati: Zviri nerukudzo rukuru nemufaro patinogamuchira nekukorokotedza Hon Lindiwe Nonceba Sisulu segurukota rezveKushanya muSouth Africa. Ruzivo rwake rwakafara uye rwemwaka zvechokwadi runotungamira zvirongwa zvekudzoreredza kwete chete kuSouth Africa asi neKondinendi zvachose. South Africa inomira senge Continental yekubatanidza Hub ye Africa.
KuAfrican Tourism Board, tiri kutarisa kubatana pamwe nekushanda pamwe ne Dhipatimendi reKushanya muSouth Africa mukurerutsa Kutengeserana neInvestment muAfrican Tourism, kuumbiridza Tourism muAfrica, kugadzirisa rondedzero yeAfrica nekusimudzira eco-Tourism, sezvatinosimudzira kukura kwakasimba, kukosha uye mhando yekufamba uye kushanya kubva-uye mukati meAfrica.
Tourism ndiyo imwe yezvikamu zvinovimbisa zvikuru zvehupfumi mu Africa. Iine mukana wekuti isangotungamira kukura kwehupfumi kuKondinendi chete asi kukurudzira budiriro inosanganisa yeupfumi nekudaro ichidaidzira kubatana kwepedyo mukati medu Nhengo dzeMatunhu nevashandi vese vechikamu kusimudzira chikamu chakasimba chekufamba uye chekushanya.
African Tourism Board pamwe nevamiriri vayo mukondinendi yeAfrica vari kushanda pamwe neese akazvimirira uye eruzhinji zvikamu pakuvakazve indasitiri yekufambisa neyekushanya mu Africa.
Ndiani Hon Lindiwe Nonceba Sisulu
Mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, vakagadza Gurukota Lindiwe Sisulu segurukota rezveKushanyirwa musi wa5 Nyamavhuvhu 2021 mukugadzirisa zvinhu zvisina chinangwa chaicho, kunze kwekubvisa hurumende mubato raZuma muKabineti.
Gurukota idzva rekushanyirwa rinotsigirwa nemutevedzeri wegurukota rezvekushanya, VaFish Mahlalela. Basa reDhipatimendi reKushanya nderekugadzira mamiriro ekugonesa mukusimudzira kukura nekusimudzira kwekushanya muSouth Africa.
South Africa Gurukota Rezvekushanya, Hon. Lindiwe Sisulu
Sisulu akaberekwa kune vatungamiriri vechimurenga Walter uye Albertina Sisulu in Johannesburg. Ndiye hanzvadzi yemutori wenhau Zwelakhe Sisulu uye wezvematongerwo enyika Max Sisulu.
Madamu Sisulu vakagadzwa saGurukota rezveVashanyi musi wa5 Nyamavhuvhu 2021. Vaive Gurukota rezvekugara kwevanhu, mvura, uye hutsanana kubva musi wa30 Chivabvu 2019 kusvika musi wa5 Nyamavhuvhu 2021. Vaive Gurukota rezvehukama pamwe nekubatana kubva musi wa27 Kukadzi 2018 kusvika 25 Chivabvu 2019 Mai Lindiwe Nonceba Sisulu vaive Gurukota rezvekugara kwevanhu muRepublic of South Africa kubva musi wa26 Chivabvu 2014 kusvika 26 Kukadzi 2018.
Vanga vari nhengo yeParamende kubvira 1994. Vanga vari sachigaro weKutangwa kweMusangano wevashumiri vemu Africa nezve Dzimba nekusimudzira Madhorobha kubvira 2005. Amai Sisulu inhengo yeNational Executive Committee yeAfrican National Congress (ANC) uye nhengo yeNational Working Committee yeANC. Aive mutirastii weSouth Africa Democracy Dzidzo Trust; mutirastii weAlbertina naWalter Sisulu Trust; uye nhengo yeBhodi yeNelson Mandela Foundation.
Ms Sisulu vakapedza General Certificate yeDzidzo (GCE) Cambridge University Ordinary Level paSt Michael's Chikoro muSwaziland muna 1971, uye GCE Cambridge University Advanced Level muna 1973, zvakare muSwaziland.
Anobata degree re Master of Arts in History kubva kuCentre for Southern African Studies yeUniversity yeYork uye M Phil zvakare anobva kuCentre for Southern African Studies yeUniversity yeYork akawana 1989 nenyaya yemusoro wekuti: ”Vakadzi Vari Kubasa uye Hondo Yerusununguko muSouth Africa. ”
Muzvare Sisulu zvakare vane BA degree, BA Honours degree muHistory, uye diploma muDzidzo kubva kuYunivhesiti yeSwaziland.
Basa / Nzvimbo / Hunhu / Mamwe Mabasa
Pakati pa1975 na1976, Mai Sisulu vakasungwa nekuda kwezvematongerwo enyika. Akazobatana neUmkhonto we Sizwe (MK) uye akashandira zvivakwa zvepasi pevhu zveANC achiri muutapwa kubva 1977 kusvika 1978. Muna 1979, akadzidziswa zvechiuto achishandisa huchenjeri hwemauto.
Muna 1981, Mai Sisulu vakadzidzisa paManzini Central High School muSwaziland, uye muna 1982, vakaita hurukuro kuDhipatimendi reNhoroondo yeUniversity yeSwaziland. Kubva muna 1985 kusvika 1987, akadzidzisa paManzini Teachers Training College uye aive muongorori mukuru weHistory for Junior Certificate Examinations yeBotswana, Lesotho, neSwaziland. Muna 1983, akashanda semupepeti-mupepeti weThe Times yeSwaziland kuMbabane.
Amai Sisulu vakadzokera kuSouth Africa muna1990 uye vakashanda semubatsiri kunaJacob Zuma semukuru weDhipatimendi reUngwaru reANC. Akashandawo seChief Administrator weANC kuConferensi yeDemocratic South Africa muna 1991 uye semutungamiriri weIntelligence kuDhipatimendi reANC reIntelligence and Security muna 1992.
Muna 1992, Mai Sisulu vakave chipangamazano weNational Children's Rights Committee yeUnited Nations Educational, Scientific, uye Cultural Organisation. Muna 1993, akashanda semutungamiriri weGovan Mbeki Research Fellowship paYunivhesiti yeFort Hare, uye kubva muna 2000 kusvika 2002, akashanda semukuru weCommand Center for Emergency Reconstruction.
Ms Sisulu vaive nhengo yeManagement Committee, Policing Organisation uye Management kosi yeUniversity yeWitwatersrand muna 1993; nhengo yehutungamiri hweSub-Council pamusoro peIntelligence, Transitional Executive Council muna 1994, uye sachigaro weParamende Joint Standing Committee yeIntelligence kubva 1995 kusvika 1996.
Asati asarudzwa seGurukota rezveVashandi veHurumende neHurumende, Amai Sisulu vakashanda semutevedzeri wegurukota redzimba kubva muna 1996 kusvika muna 2001. Vaive Gurukota rezveUngwaru kubva muna Ndira 2001 kusvika muna Kubvumbi 2004; Gurukota rezve Dzimba kubva muna Kubvumbi 2004 kusvika Chivabvu 2009; uye Gurukota rezvekudzivirirwa nemauto emauto kubva muna Chivabvu 2009 kusvika Chikumi 2012.
Aive Gurukota revashandi veHuzhinji neHurumende yeRepublic of South Africa kubva munaJune 2012 kusvika 25 Chivabvu 2014.
Tsvagiridzo / Mharidzo / Mipiro / Kushongedza / Mabhasari uye Mabhuku
Ms Sisulu vakaburitsa anotevera mabasa:
Vakadzi veSouth Africa muChikamu Chekurima (kabhuku). York University mu1990
Vakadzi Vebasa neRusununguko Kurwira muma1980
Themes muzana ramakumi maviri emakore South Africa, Oxford University Press. 1991
Vakadzi Vanoshanda Mamiriro muSouth Africa, South Africa Situation Kuongorora. Dare Renyika Rekodzero Dzevana. UNESCO. 1992
Kuunzwa kweDzimba neRusununguko Chata: mucherechedzo wetariro, Nyowani Agenda neChipiri Quarter. 2005.
Ms Sisulu vakapihwa Human Rights Center Fsociation kuGeneva muna 1992. Chirongwa chavo cheUnited Nations Center chakakonzera kuti University yeWitwatersrand Chikoro chebhizinesi chigadzire kosi yekudzidzira kusimudzira hunyanzvi hwemapurisa enhengo dzeMK.
Akagamuchira Mubairo wePurezidhendi weBreaking New Ground muHurumende Kuunza Strategic neInstitute for Housing yeSouth Africa muna 2004; Muna 2005, akagashira mubairo kubva kuInternational Association for Housing Science mukucherechedza mipiro uye kubudirira mukugadzirisa nekugadzirisa matambudziko epamba.
Ndiani VaFish Mahlalela, Mutevedzeri wegurukota reDhipatimendi Rekushanya reRepublic of South Africa?
VaFish Mahlalela anga ari Mutevedzeri weGurukota reDhipatimendi Rekushanya reRepublic of South Africa kubvira 29 Chivabvu 2019. Iye inhengo yeAfrican National Congress muNational Assembly yeSouth Africa
SA Mutevedzeri wegurukota Rezvekushanya Hove Mahlalela
Akawana chitupa chake chematric kubva kuNkomazi High School uye ane Honours Degree in Governance neHutungamiri kubva kuYunivhesiti yeWitwatersrand.
Mushure mesarudzo dza1994, akaendeswa senhengo yeparamende uye ave achishandira nyika mumabasa akasiyana mudunhu nemumatare eparamende.
Akave ari nhengo yedare reparamende, kwaakashanda pakati pevamwe sachigaro weStanding Committee on Public Account (SCOPA) uye sachigaro weAssociation of Public Accounts Committee yeSouth Africa, uye akashandawo sachigaro weSouthern Africa Dare Rekusimudzira rePublic Accounts.
Panguva yehutongi hwake mudunhu reMpumalanga, akashanda munzvimbo dzakasiyana siyana dzekutungamira uye achinyanya kuita anotevera mabasa, MEC wedhipatimendi rezveMamiriro ekunze nekushanyirwa, MEC weDhipatimendi rezvetsika, Mitambo uye Zvekuvaraidza, MEC weDhipatimendi reHurumende Yemunharaunda neTraffic, MEC. weDhipatimendi reMigwagwa nekutakura, MEC weDhipatimendi reDziviriro uye Chengetedzo, uye MEC weDhipatimendi rezvehutano nekusimudzirwa kwevanhu.
Iye zvakare akamboshanda seye ANC Whip muPortfolio Committee yehutano muNational Assembly
VaMahlalela vane nhoroondo inodadisa mukurwira rusaruraganda muSouth Africa, vakadzingwa muma1980 uye vakadzidziswa zvechiuto munyika dzakawanda senhengo yeboka remauto eANC, Mkhonto We Sizwe Muna 2002 vakasarudzwa kuva Sachigaro weANC muDunhu reMpumalanga muna 2002.